Kulan Bulsheed Ballaaran oo ka dhacay Dalka Koofur Afrika.
Isu imaatin ballaaran oo ay kasoo qayb galeen dad fara badan ayaa lagu qabtay magaa lada Cape Town ee dalka Koofur Afrika xalay oo ay taariikhdu ahayd3/11/2004. Kulankaas oo uu soo abaabulay Daahir Mox, ed Cali oo ka tirsanaan jiray golaha dhexe ee ururka ONLF 16kii sano ee inoo danbaysay.
Wuxuu Daahir hadalkiisii ku bilaabay,waxaad in badan iiga barateen hadallo naftiinna farxad galiya,maantase way ka duwantahay.waxaan idiin sheegayaa in aan iska casilay xubinimadii jabhadda waddaniga xoraynta ogaadeenya (jwxo),taasoo aan hubo in aysan jeclaysan doonin qaar badan oo idin ka mid ah,qaar kalena ay u fasiran doonaan si ay iyagu isugu sheekeeyeen oo ay suurto gal tahay inay xaqiiqda ka fogtahay.
Is casilaadaydu ma aha in aan hawl gabay ama ay halgankii iyo waajibaadkii halganeed ee i saarraa soo gabagaboobeen.halgankii wuu socdaa,anna waxaan idiin ballan qaadayaa in aan halgami doono inta inta ay xagashaydu laabmayso uuna jiro dulmiga lagu hayo dadkayga,wuxuuse noqon doonaa halgankayga cusub mid la qorsheeyay oo u hawl gala qaab ay fahmi karaan dadka iska leh,una dhag raariciyaan umado badan oo horay u diidanaa inay daneeyaan wax ka qabadka dhibaatada jirta sida aan is lee nahay.
Intaa kaddib wuxuu daahir ka hadlay taariikhdii dheereyd ee halganka dadka soomaalida ah ee Itoobiyo ku dhaqan,heerarka uu soo maray,waxa mar walbo lugta qabanaayay,iyo qaabka ay ku samaysmi jireen ururadii halganka soo hoggaamiyay.
Wuxuu si gaar ah uga hadlay wax qabadkii halganeed iyo guulihii siyaasadeed ee uu soo dheelmay ururka ONLF wixii hadda ka horeeyay,isagoo raaciyay inay jiraan saax iibbo badan oo isugu jira qaar ay noloshoodii wanaag ku gabagaboowday iyo qaar noolba oo ay halganka ku saaxiibeen oo uusan iloobi doonin.
Halganka waxaa dhaliyay asal ahaanba dulmi iyo caddaalad darro lagu sameeyay dadka ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ee ay Itoobiyo gumaysato,ujeedada laga leeyahayna waa in dulmigaas meesha laga saaro.
Waligeed waa jiri jireen ayuu yiri daahir baasto dawlado xaq darada ay ku dhaqmaayaan u sameestay xeerar ay ku difaacdaan iyo dad xaq ku socda oo doonaaya inay jabiyaan xeerkaas aan ayaka u danaynaynin ee hor istaagaaya xaqa ay u leeyihiin jiritaankooda umadnimo.
Walaalayaal:isma diidsiinayno ayuu yiri xaqiiq badan oo jirta wakhtigaan hadda la joogo,mase aha wax nagu dhalin doona dabac nagu xanbaara in aan ka been sheegno soo jireenka taariikhda,aanna il dabacsan ku fiirinno dhibaatada nooc walbo leh ee lagu haayo shacabka loo diiday inay dhadhamiyaan macaanka caddaaladda,Edeggana loogu xereeyay millatariga tuutaysan ee aan naxariista lahayn.waxaase wax walbo ka horeysa ayuu yiri in aan dib ugu noqonno wax badan oo anaka dhexdeenna ah.
Waddadu waa dheertahay ayuu yiri,guushana waxay ku xirantahay sida aan u fahamno caqabadaha na horyaalla,una furfurno dabinanada naloo dhigay.
Mar uu ka hadlaayay dagaalada sokeeye ee dalka ka socda wuxuu yiri daahir,waa arrin xanuun badan oo dhabar jabinayso waxa aan raadinayno, waxaana ka danbeeya dad wax ma garato ah iyo danaystayaal aan aabayeel laheen. Waxaa lagu waayay nafo badan,waa dagaal kan wax dilaaya iyo midka la dilaayo midkoodna uusan garan karin sababta dhalisa,waxaanse leenahay cid walbo ha ogaato xigmadda loo noolyahay inay tahay is faham iyo wada hadal ee aysan ahayn dagaalka sokeeye,tusaalana waxaa u ah wixii ka dhacay meelo badan oo ay soomaaliya ku jirto.
dhanka kale wuxuu ka hadlay sida ay u hooseeyaan adeegyada lagama maarmaanka u ah nolosha dadka sida caafimaadka ,waxbarashada,isgaarsiinta iyo waliba baaba'sanaan ta heerka maciishadda dalka,halka meelo badan oo dunida ka mid ah neefka xoolaha ah loo siiyo biil wax ku dhow (3)saddex doollar,anaga dadkeenna in badan oo ka mid ah ma helaan hal doollar oo joogto ah oo ay ku saxaan nolol maalmeeddkooda,taasoo aad garan kartaan waxa sababay.
Guntii iyo gabagadii wuxuu mudane daahir ugu baaqay dadka soomaalida ah ee ay Itoobiyo gumaysato inay u hawlgalaan midnimadooda oo fure u ah wax walbo oo ay doonayaan,haddii midnimo la waayo halgankana kuma gu ulaysanaysaan meesha aad joogtaanna waxba kama noqonaysaa ayuu hadalkiisii ku soo xiray daahir mox'ed cali oo wajigiisa aysan ka muuqanin farxad badan oo lagu aqoon jiray.
Intaas kaddib waxaa la waydiiyay su'aalo badan oo ay ka mid ahaayeen:
S-maxay yihiin sababaha jira ee kugu kallifay inaad ururka iska casisho?
J-way badanyihiin sababaha,waxaanse kaga gudbaynaa intaas,waayo in aan sharaxaad ooda dib ugu noqono waxaa ka haboon in aan ku tallabsanno waxa hadda nagu aadan.
S-sideed u aragtaa go'aankii uu ururka ONLF ku dagaal galay 1994kii maxayse natiijadiisu tahay,mase ku haboonaa duruufta lagu qaatay?.
J-go'aanka uu ku dagaal galay ururka waxaa qaatay golaha dhexe ,xubnaha ururkana way ku khasbanaayeen inay yeelaan mid oggol iyo mid kasoo horjeedaba maadaama ay macnaha ururnimada sidaas tahay, natiijadiisana waa halganka hubaysan ee (10) jirsaday ayna wadaan isla kuwii go'aamiyay,ammaa inuu ku haboonaa duruufta lagu qaatay iyo in kale waa lagu kala gaddisnaan karaa haddabana bulshadu way ku kala aragti duwantahay.
S-wax ma nooga sheegi kartaa waxa dhaliyay khilaafka intii muddo aha ka dhex jiray ururka ONLF maadaama aad hadda ka baxday?
J-kol haddaan ka baxay waxay ku fiicantahay inaanan arimihiisa dhex galin,haddaanse ka sheego intaan ogahay,ururkan khilaaf dhaqan uma ahaan jirin,waase wax dhici kara inay dad badan oo gadaal kaga soo biiray iyo kuwo hore oo si khaldan u xisaabtamay la ymaadeen waxyaabo aan horay loo aqoon jirin,waxaanse ka warhayaa in arinta ay gacanta ku qabteen dad ururka dhexdiisa tixgalin ku leh,haddana ay xaaladda ONLF caadi tahay.
S-waxaad tiri ururkan khilaaf caado uma ahaan jirin,markuu dagaalka ku dhawaaqay miyuusan garab isaga ka go'ay nabad qaadanin dawladdana la heshiinin?.
J-waxa aan leeyahay khilaaf ma lahaan jirin waa ONLFtii danta dadka loo asaasay ee la sameeyay sanadkii 1984kii,qolyahan aad sheegayso uma aqaanno inay ONLF yihiin shacabka ogadenya iyo dawladda Itoobiyana sidaas ayay u ogyihiin.
S-Bishii (8aad)siddeedaad ee sanadkan markuu guddoomiyaha ONLFta booqashada ku joogay dalkan koofur afrika qaar ayaa ka hadlay Idaacadda BBCda iyagoo mucaaradayo Jeneral max'ed cumar cusmaan sideed iyaga u aragtaa?.
J-waa dad aragtidooda cabiray xaq bayna u leeyihiin inay ka hadlaan wixii ay is leeyihiin waa la qalloociyay ee danta dadkooda ah,wayse jiri karaan amaba jiraan waxaan ku diidanahay.
S-sideed u aragtaa maamulka killilka ee aad adiga mar ka mid ahaan jirtay madaxda ugu sarraysa?.
J-waxaan ku kala gaddisanahay aniga maamulka killilka aragtida ku aadan qaabka in bulshada lagu dhaqo ay tahay,waxaanse qirayaa inay yihiin kuwo ka wakiil ah danaha dadkooda halka ay joogaan,in lagu kalsoonaadana ay ku xirantahay sida ay u gutaan mas'uuliyadda ay qaa deen,in kastoo ay dhici karto wax badan oo ay garanayaan fulintooda inay ka horistaagto duruufta ku xeeran ee aan wada garan kano.
S-warar baa jira sheegaaya inay wada hadallo u socdaan ONLF iyo EPRDF,kuwaasoo ujeedada laga leeyahay ay tahay in maamulka killalka gacanta loo galiyo ururka ONLF,maxaad ka ogtahay arintaas?.
J-wada hadalka iyo wada xaajoodka ma aha wax reeban mar walbo iyo meel walbo,waxa ururka ONLF u qorshaysannaa wuu ka fogyahay sida ay dad badan sawiraayaan,mase jiro ilaa iyo hadda wax arintaas xaqiijinaaya oo aan xog ogaal ka ahay ama maqlay.
S-Mr:daahir ma la dhihi karaa dareen qabiil ayaad jabhadda isaga casishay?.
J-maya,aragtida xubnaha ururkan isu keentay mid qabiil ma ahayn haddana kuma wada joogaan taasoo meesha ka saaraysa wax dareen qabiil la yiraahdo,waxa ay doonayaana qabiil gaar ah ma laha,saaxiibadayda aan ururkan ka wada tirsanaan jirnayna way ogyihiin sida aan sheegayo inay aragtidayda runta ah tahay,waxaase jira wax dhacay marar dhowr ah oo markaan intii muddo ah ka fakaray igu kallifay inaan sidaan xal u arko,mase doonayo in aan hadda ka hadlo ama tafaasiil ka bixiyo,waxaase hubaal ah wax walbo inay bannaanka imaan doonaan xilligooda.
Waxaa soo diyaariyay:Wali Cabdi Faarax.
Dhuubo104@yahoo.com ama shariifo104@yahoo.com